Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ emeela ka a mara na steeti ahụ na-atụ anya inweta osikapa ruru metrik ton narị puku isii n'ime ahọ a, site n'atụmatụ ọrụ ugbo na steeti ahụ, ma n'oge ọkọchị.
Gọvanọ Obianọ kwuputara nke a oge ọ gara ịmara ka ọrụ si aga n'Ọgbaru, bụ ebe a na-arụnya ihe e ji agba mmiri n'ubi n'oge ọkọchị, bụkwa nke e sitere na ya wee sụchaa ma kesaa obosara ala ruru hekta puku ise, nye ndị ọrụ ugbo na-akọ osikapa (n'efù), bụkwa ebe ha kọnyegoro osikapa ugbu a.
Ka o letachaara ka ya bụ ọrụ ngo si aga, gọvanọ mere ka a mara na site n'ịgba mbọ nke ọchịchị ya, na steeti ahụ ebidola ịkọpụta osikapa ruru metrik ton narị puku atọ na ịrị anọ na ise, bụ nke karịrị ihe a na-eri na steeti ahụ, ma kọwaa na nke ahụ bụ n'ihi mnwogharị dị iche iche ọchịchị ya wetagoro na ngalaba ọrụ ugbo na steeti ahụ.
O kwuru na ọchịchị ya eguzobela otu ndụmọdụ pụrụ iche n'ihe gbasaara iji akụrụngwa ọgbara ọhụụ were akọ ọrụ ugbo, iji hụ na ndị ọrụ ugbo steeti ahụ bụ ndị ma nke ekwe na-akụ ma na-esonyekwa n'ụzọ ọgbara ọhụụ na mnwogharị a na-enwezị na ngalaba ọrụ ugbo n'ala anyị ugbu a.
O kelere FADAMA 3, bụ ndị na-akwàdo ọrụ ngo ahụ, n'ihi ezi mmekọrịta ha na njikọ aka ha na ọchịchị steeti ahụ na-ejikọ iji wee nwogharịa ngalaba ọrụ ugbo steeti ahụ, ma tokwa ha banyere ezi ihe niile ha mepụtagoro, nke gụnyere inye ndị ntorobịa ọzụzụ na nkwado iji bagide n'ọrụ ugbo.
Na ntụnye nke ya, kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka iji igwè akọ ọrụ ugbo, isucha ihe a kọpụtara n'ubi na ibupu ya mba ofesi, bụ maazị Afam Mbanefo, mere ka a mara na n'okpuru FADAMA 3, na ọrụ ngo iwunye ihe ahụ e ji agba mmiri na-agakwa n'ihu n'Ihiala, Ezira, Ọmasị na Ọmọr, ebe ọrụ na-agakwa n'ihu n'ịrụ okporo ụzọ dị iri na otu, bụ ụzọ e si aba n'obodo dị iche iche ebe a na-akọpụta ihe oriri na steeti ahụ.
N'okwu nke ya, onye nhazi atụmatụ FADAMA 3 na steeti ahụ bụ maazị Chukwuka Egbue kwuru na ọ bụrụ na a rụchaa ya bụ ọrụ ngo, na a ga-esi mba Spain kpọta ndi na-ahụ maka ya, bụ ndị ga-eleru ya anya ihe dịka otu ahọ, tupuu ndị be anyị ewegharazie ọnọdụ ileru ya anya, ka ha wee nwze ike ịmụtacha otu e si ahazi ya nke ọma.